Kendall နဲ့ Kylie Jenner ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ မတူညီသောအရာများ
Kylie နဲ့ Kendall Jenner ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ မတူညီသောအရာများ
16 May 2018 . 10:24 AM
Jenner Family ထဲမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူတွေရဲ့အသည်းနှလုံးမှာနေရာယူနေတာကတော့ Kylie Jenner နဲ့ Kendall Jenner တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Jenner တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုသိပ်မစပ်စုမိသူတွေက တစ်ယောက်တည်းလို့ အထင်မှားနေကြတာမျိုးလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာတစ်အူထုံ့ဆင်း ညီအစ်မနှစ်ဦးဆိုပေမယ့် ဘယ်သူက အကြီးလဲ၊ ဘယ်လိုကွာခြားချက်တွေရှိလဲဆိုတာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Kendall နဲ့ Kylie နှစ်ဦးအနက် Kendall Jenner ဟာ အစ်မဖြစ်ပြီး၊ Kylie ဟာ ညီမဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကွာခြားမှုက နှစ်နှစ်ကွာခြားတာဖြစ်ပါတယ်။ Kendall ဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ရက်နေ့ မှာ မွေးဖွားပြီး Kylie ဟာ ၁၉၉၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၀ရက်နေ့ မှာ မွေးဖွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ Kendall Nicole Jenner နဲ့ Kylie Kristen Jenner တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Kendall (Source : stylecaster.com)
Kendall ဟာ Model တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ မျက်နှာပေါက်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဟာ ယောကျာ်းလေးဆန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရုပ်တည်တည်နေတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အစားအသောက်စားတဲ့နေရာမှာ Kendall ဟာ ပိုပြီး Junk Food တွေကို အစားများတဲ့သူဖြစ်လို့နေပါတယ်။ Kendall ဟာ အမြဲတမ်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
Kendall Jenner (Source: hypebae.com)
ဝတ်ပုံစားပုံကအစ အမြဲတမ်း Fresh ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဆံပင်အရှည်ကိုလည်း ပခုံးအကျော်အထိသာထားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု Kylie နဲ့ ကွဲပြားတာဟာ Kendall ဟာ ပိုပြီး Slim ဖြစ်ပြီး Flat Chest ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ International Model တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Kendall မှာ Lip Tattoo ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Kylie Jenner (Source : elperiodico.cat)
Kylie ကတော့ Kendall နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ သူမရဲ့မျက်နှာ်ကျက မိန်းမဆန်ပြီး နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးရအောင်ပြုပြင်ထားသူပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အရလည်း Kendall ထက်အများကြီးထွားတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Kylie Cosmetic ဆိုတဲ့ Makeup Brand ကို ဦးစီးနေတဲ့ Business Woman အဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Kylie Jenner with Stormi (Source : rap-up.com)
Kylie ဟာ Tyga နဲ့ တွဲခဲ့သူပါ။ ဒါ့အပြင်အခုလက်ရှိမှာ Kylie ဟာ Travis Scott နဲ့ သမီးချောလေး Stormi ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ သမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားပြီးတာတောင် အမြဲတမ်းကြော့မော့လှပနေတတ်သူပါ။ အလှအပကို ကြိုက်နှစ်သက်လွန်းခဲ့လားဆိုတာကို သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ Hair Style တွေမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Kendall နဲ့ Kylie က အကျင့်တွေနဲ့ နေပုံထိုင်ပုံတွေကွဲပြားနေပေမယ့် တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် အချစ်ပိုကြပါတယ်။ မတည့်အတူနေဆိုရင် ပိုများမှန်နေမလား? ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Kendall နဲ့ Kylie ကို ခွဲခြားတတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Kendall နဲ့ Kylie ယှဉ်လိုက်ရင် ဘယ်သူ့ကိုပိုကြိုက်လည်း ပြောပြပေးသွားဦးနော့်။
Kylie နဲ့ Kendall Jenner ညီအဈမနှဈယောကျရဲ့ မတူညီသောအရာမြား
Jenner Family ထဲမှာ ကမ်ဘာတဈဝှမျးကလူတှရေဲ့အသညျးနှလုံးမှာနရောယူနတောကတော့ Kylie Jenner နဲ့ Kendall Jenner တို့ ညီအဈမနှဈယောကျတို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Jenner တို့ ညီအဈမနှဈယောကျအကွောငျးကိုသိပျမစပျစုမိသူတှကေ တဈယောကျတညျးလို့ အထငျမှားနကွေတာမြိုးလညျးရှိတတျကွပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးဟာတဈအူထုံ့ဆငျး ညီအဈမနှဈဦးဆိုပမေယျ့ ဘယျသူက အကွီးလဲ၊ ဘယျလိုကှာခွားခကျြတှရှေိလဲဆိုတာတှကေို ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
Kendall နဲ့ Kylie နှဈဦးအနကျ Kendall Jenner ဟာ အဈမဖွဈပွီး၊ Kylie ဟာ ညီမဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အသကျကှာခွားမှုက နှဈနှဈကှာခွားတာဖွဈပါတယျ။ Kendall ဟာ ၁၉၉၅ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၃ရကျနေ့ မှာ မှေးဖှားပွီး Kylie ဟာ ၁၉၉၇ခုနှဈ သွဂုတျလ ၁၀ရကျနေ့ မှာ မှေးဖှားတာဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ နာမညျအပွညျ့အစုံကတော့ Kendall Nicole Jenner နဲ့ Kylie Kristen Jenner တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
Kendall ဟာ Model တဈယောကျအဖွဈရပျတညျလုပျကိုငျနသေူဖွဈပွီး သူမရဲ့ မကျြနှာပေါကျပုံပနျးသဏ်ဍာနျဟာ ယောကျြားလေးဆနျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ရုပျတညျတညျနတေတျတဲ့သူမြိုးဖွဈလို့နပေါတယျ။ အစားအသောကျစားတဲ့နရောမှာ Kendall ဟာ ပိုပွီး Junk Food တှကေို အစားမြားတဲ့သူဖွဈလို့နပေါတယျ။ Kendall ဟာ အမွဲတမျးပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နထေိုငျတဲ့သူဖွဈပါတယျ။
ဝတျပုံစားပုံကအစ အမွဲတမျး Fresh ဖွဈနတောကိုတှရေ့မှာပါ။ ဆံပငျအရှညျကိုလညျး ပခုံးအကြျောအထိသာထားတတျသူဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခု Kylie နဲ့ ကှဲပွားတာဟာ Kendall ဟာ ပိုပွီး Slim ဖွဈပွီး Flat Chest ကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ International Model တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Kendall မှာ Lip Tattoo ရှိနတေယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
Kylie ကတော့ Kendall နဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈလို့နပေါတယျ။ သူမရဲ့မကျြနျှာကကြ မိနျးမဆနျပွီး နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးရအောငျပွုပွငျထားသူပါ။ ခန်ဓာကိုယျအရလညျး Kendall ထကျအမြားကွီးထှားတဲ့သူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျးပဲ Kylie Cosmetic ဆိုတဲ့ Makeup Brand ကို ဦးစီးနတေဲ့ Business Woman အဖွဈရပျတညျနတေဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
Kylie ဟာ Tyga နဲ့ တှဲခဲ့သူပါ။ ဒါ့အပွငျအခုလကျရှိမှာ Kylie ဟာ Travis Scott နဲ့ သမီးခြောလေး Stormi ကို ပိုငျဆိုငျထားပွီဖွဈပါတယျ။ သမီးတဈယောကျမှေးဖှားပွီးတာတောငျ အမွဲတမျးကွော့မော့လှပနတေတျသူပါ။ အလှအပကို ကွိုကျနှဈသကျလှနျးခဲ့လားဆိုတာကို သူ့ရဲ့ နှုတျခမျးလေးနဲ့ Hair Style တှမှောကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Kendall နဲ့ Kylie က အကငျြ့တှနေဲ့ နပေုံထိုငျပုံတှကှေဲပွားနပေမေယျ့ တဈယောကျအပျေါတဈယောကျ အခဈြပိုကွပါတယျ။ မတညျ့အတူနဆေိုရငျ ပိုမြားမှနျနမေလား? ဒီလောကျဆိုရငျတော့ Kendall နဲ့ Kylie ကို ခှဲခွားတတျသှားလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျ။ Kendall နဲ့ Kylie ယှဉျလိုကျရငျ ဘယျသူ့ကိုပိုကွိုကျလညျး ပွောပွပေးသှားဦးနေျာ့။